Qorshe uu damacsanaa Axmed Madoobe oo si weyn looga horyimid – hareerley News
Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qorshe ay sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay soo xulista Xubnaha baarlamaanka.
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn habka la doonayo in loosoo xulo baarlamaanka cusub.
Wuxuu sheegay in isaga iyo dadka ku aragtida ah ka digayaan in faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha iyo Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland.
Odayaasha dhaqanka ayuu tilmaamay inay doonayaan in loo madax banaaneeyo soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Jubbaland.
Xildhibaanka ayaa waxa uu tilmaamay in golaha ay kasoo horjeedaan qaabka xulista Xildhibaanada ee hada la wado taas oo ah in beel kasta ay guddiga doorashooyinka usoo gudbiyaan saddex musharax oo u tartamaya xubinimada Baarlamaanka si midkii ay doonaan ugala baxaan.
Labo Xaawa Taako ( tee sax ah?):-(Akhriso)
Dib u Eegidda Taariikhda.Qoraalku waa dheeryahay, laakin waxaan hubaa in wax badan oo kugu cusub ama si kale laguugu sheegay aad ka Aqrisan doontid. Dad badan ayaa igu yiri: Xaawa Taako wax ka qor, malaha wareerkaan ayey arkeen. Maxaad iigu sirteen!!!. Araar: Taariikhda dunida waxaa ku badan, Dhacdooyin, sheekooyin iyo shakhsiyaad aan jirin oo la […]